#UrgentInterventionInMyanmarNeeded hashtag on Telegram
币安官方中文群Thursday, March 18, 2021 12:13 PM
ကျေးဇူးပြုပြီးဒါလေး ပြိုင်တူတင်ကြရအောင်မရှဲပါနဲ့ ကိုယ့်ဝေါမှာ ကိုယ်ပြန်တင်ပါ🙏🕊🙏🕊🙏🕊
The Golden Land MYANMAR “黃金國度緬甸”如今被貪婪無恥自私腐敗沒人性的軍警蹂躪得如此淒慘。街道像殺戮場一般，隨時隨地槍炮聲響起，軍警任意破壞人民產物，半夜破門而入逮捕。手無寸鐵的人民，一個多月以來，和平抗議表達訴求，軍方卻一概不理，使出極端手法對付人民，一個又一個無辜的生命就這樣被犠牲了，還要賠上多少人的性命，外界才能看見緬甸的危機？？？緬甸急迫需要國際社會支援！！！緬甸急迫需要國際社會支援！！！緬甸急迫需要國際社會支援！！！
Burma has been turned intoaslaughter ground (notawar zone or battle ground) as BBC stated today as The deadliest day of protest. Military and police slaughtered the civilians, and arrested the peaceful protesters brutally and mercilessly. The world needs to stop watching as Myanmar needs immediate help!!!! 🌸🕊
May the people of Myanmar free from this dictatorship ASAP!!! 🌸🕊
ယခုအခါ မြန်မာသည်(စစ်ဇုန် မဟုတ်)သတ်ကွင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးမည့်စစ်တပ်နှင့်ရဲများသည်အရပ်သားများအား မကြောက်ရွံ့ဘဲသတ်ဖြတ်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်စောင့်ကြည့်မှုရပ်တန့်ပြီး ထိရောက်သော အကူအညီ ပေးရန်လိုအပ်နေသည်🌸🕊#UrgentInterventionInMyanmarNeeded#WeNeedR2PInMyanmar#WeSupportCRPH#WeStandWithCRPH#WeStandWithDrSaSa#WeStandWithUKyawMoeHtun#WeNeedUNInterventionInMyanmar#RespectOurVotes#RejectMilitaryCoup#WeSupportCDM#HowManyDeadBodyNeedForUNtoTakeAction#WhatsHappeningInMyanmar🌸🕊
ဒါလေးတော့ကူတင်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။ ဘာမှမလုပ်နိုင်လဲဒါလေးတော့ ကျေးဇူးပြုပြီး လွယ်မယ် ထင်ပါတယ်။🌸🕊#crd🕊🙏🕊🙏🕊🙏
币安官方中文群Thursday, March 18, 2021 12:12 PM